“ခင်ဦးမြို့ က …ထန်းပင် နှစ်ထောင်ကျော်ကို ….တစ်ဦးတည်းစိုက်ခဲ့သူ ကိုဝင်းစိုး” – ရွှေအလင်း
“ခင်ဦးမြို့ က …ထန်းပင် နှစ်ထောင်ကျော်ကို ….တစ်ဦးတည်းစိုက်ခဲ့သူ ကိုဝင်းစိုး”
ထန်း ပင် ၂၀၀၀ စိုက်ပျိုးခဲ့သူ ကိုဝင်းစိုး
ထန်း ပင် ထန်းတော လွမ်းမောစရာ ပါပဲလို့ဆိုရလောက်အောင် တကယ်ပဲ လွမ်းစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။ ထန်းပင်ဆိုတာ အသုံးဝင်တာ အသာထား…..အပင်ပုံပန်းသဏ္ဍန် အရ..ဖြောင့်စင်းသော ပင်စည် နဲ့ သပ်ယပ်တင့်တယ် တဲ့အခက်အလက်တွေ နဲ့ လောကအလှ ဝန်းကျင် မှာ ထောင်မတ်သောပန်းအိုးလေး စိုက်ထားသလို မို့ ကျမ အလွန် ချစ်ခင် တဲ့ ဖေးဘရိတ် သစ်ပင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…။
ငယ်ငယ် က ရွှေတိဂုံစေတီ ဖူးရန်သွားတဲ့အခါ မိဘတွေကမြောက်ဘက်မုခ်စောင်းတန်းက ပဲ တက်လေ့ရှိတာမို့…။မြောက်ဘက်မုခ် မှာ ထန်းပင်ကြီးသည် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ် ကိုဦးခိုက်နေသယောင် ပုံရိပ်ဟာ ငယ်ဘဝ ထဲကစွဲမြဲနေခဲ့ဘူးပါတယ်..။
နောက် ဆရာမဖြစ်တော့ ပုသိမ်ကြီး စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ မှာ…။ ကနောင်မင်းသားကြီး ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းထန်းတော အနီးမှာ..။ထန်းပင် ၂၀၀၀၀ လောက်တော့ရှိပါသတဲ့..။ ၄၆နှစ်မှာ ကံတော်ကုန်သွားတဲ့မင်းသားကြီး မှာ ထန်းရေသောက်တာ ဖယ်ထားရင် ထန်းပင်စိုက်တဲ့ကုသိုလ်တော့ပါသွားမှာ အမှန် ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ် ကျွန်မ အညာ ကိုရောက်တဲ့အခါ အညာဒေသက ထန်းသီးများကား အရေးလုပ်သူမရှိ။ ။ အပင်ပေါ်မှာ အခိုင်လိုက်ခြောက်ကပ်နေတာ မြင်ရတော့ စိတ်မသက်မသာ မြင်ကွင်းအဖြစ်မျက်နှာ လွှဲခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ထန်းတက်သူများ မရှိတော့…ပြည်ပ ထွက်ခွာသွားသူများ…… များလာလို့ အားလျော့ခဲ့ပါသောလယ် ယာကဏ္ဍ….ထန်းလျက်ချက်ဘို့ ထင်းရှားပါးမှုကလည်း ထန်းများရှင်သန်ရပ်တည်မှုကို ထောက်ကန်မပေးနိုင်..။အော်…လွမ်း လည်းလွမ်း၊ မောလည်းမော သောချစ်သောထန်းတောများ ၊ထို ချစ်သော ထန်းတောများ သည် အညာ မှာမပျော်ပိုက်တော့ပြီလော….။ ကျွန်မဝမ်းနည်း မိပါတယ်…။
ခင်ဦးမြို့ က ကိုဝင်းစိုး ဆိုသော သူကိုတွေ့တော့ အနည်းငယ် အားတက်မိပါတယ်..။ ထန်းပင် နှစ်ထောင် တစ်ယောက်တည်းစိုက်ပျိုးပါသတဲ့။သူကတော့ အိမ်ရှေ့မင်းသားလို ထန်းရည်သောက်ချင်လို့စိုက်တာတော့မဟုတ်ပါ။ အညာအလှကိုနိုင်သလောက် ထိန်သိမ်းလိုသူ ဖြစ်ပါတယ်…။
ကျွန်မ က ကိုဝင်းစိုး ဒီလို ဇွဲ နပဲ နဲ့ စိုိက်ဘို့ ဘယ်သူကတွန်းအားပေးခဲ့ပါသလဲ ..ဆိုတော့..။ ဆရာမရယ် သစ်ပင်စိုက်တယ် ဆိုတာ ကုသိုလ် ရတာပဲလေ…. တဲ့..တီဗီက တရား နာဘူးတယ် ..။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်စိုက်ခဲ့တာတဲ့..။ သူ့နာမည်က ကိုဝင်းစိုး အခုဆိုအသက်၅၅ နှစ်ရှိပါတယ်…။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းကစိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ သူ့အသက်၄၅ နှစ်က စတင်စိုက်ခဲ့ပါတယ်..။ ခင်ဦး မြို့ မြင်းဒေါင်းရွာကနေ သာဝတ္ထိ ရွာ ကို သွားတဲ့ လမ်း ကာဘိုးဆည် ကရေပေးမြောင်း တစ်လျှောက် ကိုရွေးခဲ့ပါတယ်..။
ထန်းသီး တွေ အလိုလို ကြွေကြနေတဲ့ သာဝတ္ထိရွာ ရဲ့ တောင်ဘက်က ဥယျာဉ်ရွာကနေ ထန်းသီးတွေကိုလှည်းနဲ့ တိုက်ပါတယ်…။ပြီး တော့ ရေပေးမြောင်းနဘေး လမ်းတစ်ဘက်တစ်ချက်ကို စတင်စိုက်ပျိုးပါတော့တယ်…။ထန်းသီး စိုက်ဘို့ မြေကျင်းတူးဘို့ ပေါက်တူးကိုလည်းသယ် …။ စိုက်ကျင်းကိုလည်းတူး…။တူးလိုက် စိုက်လိုက် နဲ့ မနက်နေထွက်ကတည်းက စိုက်တာ… တစ်ရက် ကိုအပင် ၂၀၀ ပြီးဘို့မနည်းအားခဲလုပ်ဆောင်ရပါတယ်..တဲ့..။
ကိုဝင်းစိုးက လယ် ၁၅ ဧက ရှိသလို နွားကလည်း ၁၈ကောင်ရှိလေတော့ ပင်မ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အားလပ်ရှာသူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါ..။သူ့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်..။သူ့နေတဲ့ ရွာနဲ့ နီးတဲ့လမ်း လည်းဖြစ်တယ် ဆိုတော့ အမြဲတမ်းကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်..။
မညည်းမညူ တစ်ဦးတည်း စိုက်ခဲ့တာ လမ်းရဲ့ ယာဘက်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အပင်၁၀၀၀ ရှိခဲ့ပါတယ်..။ဇွဲနဘဲနဲ့စိုက် လည်းစိုက်….. သေသွားတာရှိခဲ့လျှင်လည်း ချက်ချင်းပြန်လည် ဖာထေးခဲ့ပါတယ်..။၂၀၁၂ ကျတော့လမ်းရဲ့ ယာဘက်ကို စတင်စိုက်ပျိုးတာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစိုက်သလိုမျိုး အပင် ၁၀၀၀ ထပ်စိုက်ခဲ့ပါတယ်..။
၂၀၁၆ မှာတော့ အပင်မပေါက်တာတွေပြန်လည် ဖာထေးတာ အခုဆို ခင်ဦး မြို့ မြင်းဒေါင်းရွာကနေ သာဝတ္ထိ သွားရာ မြေသားလမ်း လေးတစ်ဘက်တစ်ချက် မှာ ဝေဆာလှပနေပါတော့တယ်..။
ကာဘိုးဆည် ကရေပေးမြောင်း တစ်လျှောက်မှာ အခုဆိုိ ၁၀နှစ်သား ထန်း နဲ့ ၇နှစ်သားထန်းပင်များကို တွေ့ရပါတော့တယ် ။ထန်းပင်တွေကြီး လာပြီ ဆိုတော့ ထန်းပင်တွေက ရွာထဲမှာ လည်းမရှိ…။ အများပိုင်နေရာ ထဲမှာဆိုတော့..တစ်ယောက်ယောက် တစ်ခုခု ခူးဆွတ်မယ် စားမယ် ဆိုရင်ကော…. လို့ကျွန်မကမေးမိပါတယ်..။
ဆရာမရယ် စစိုက်ကတည်းက အများအတွက်လှူပြီးသားပါတဲ့..။ အပင်ပျောက်သွားတဲ့နေရာပြန်စိုက်ဘို့ ကျွန်တော်ကတော့အရိပ်တစ်ကြည့်ကြည့်ပါပဲ တဲ့..။ရွာမှာ လည်းဆေးခန်းရှိတယ်လေ… ဆေးခန်းရှေ့ မှာ ကျွန်တော်ဗန်ဒါပင် ၂ပင်စိုက်တယ် … တစ်ပင်ပဲရှင်တယ်…။ ထပ်စိုက်ပါမယ် တဲ့..။ ဆေးခန်းက ဝန်ထမ်းဆရာမလေး တွေစားဘို့ ငှက်ပျောပင်လည်း ၅ပင် စိုက်ပေး ထားပါတယ် လို့ ကိုဝင်းစိုးရဲ့ ဇနီး မသန်းသန်းဆင့်ကဖြေပေးပါတယ်..။
သစ်ပင်များကိုချစ်သော..သစ်ပင်စိုက်သူများကိုပိုလို့ချစ်သောကျွန်မ ရဲ့ မျက်စေ့တွေက တော့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားမှာ ကိုဝင်းစိုးများစွာ ရှိနေပါစေဆုတောင်းလျက် ရှာဖွေ နေမိတာ အမှန်ပါ..။
မန္တလေးတက္ကသိုလ် ရုက္ခဗေဒ ဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါ်ကလျာလု၏အဆိုအရ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှ ယခုနှစ်အတွင်း ထန်းပင် ၅ဝ ရာနှုန်းခန့် လျော့ကျသွားခဲ့ပြီး အပင်ပေါင်း ငါးသန်းခန့် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်ဟု ဆို ပါတယ်.။
ထန်းပင်တွေကအညာဒေသအတွက်သဘာဝကပေးထားတဲ.ရေစုပ်စက်ကြီးတွေပါမြေအောက်ပေ၂၀၀ကရေတွေကိုသူရှင်သန်ဘို.စုပ်ယူရင်း ယာတွေထဲအပေါ်မြေဆီလွှာတွေကိုရေရောက်စေပါတယ်။တကယ်တော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ သဲကန္တာရတွေမှာ ထန်းပင်နဲ.အမျိုးတူအပင်တွေ(စွံပလွံ လိုအပင်အုပ်စုတွေ ) ရှိနေတဲ.နေရာတွေမှာသာရေရှိတာပါ။ အိုအေစစ်လို.ခေါ်ပြီး သိပ်ကိုတန်ဘိုးထားကြပါတယ်..။
Dr.ဒေါ်ကလျာလူက ထန်းပင်တွေကအမြစ်ပေါင်းသောင်းချီရှိနေတာကြောင်. မြေအောက်ပေ၁၀၀၊ ပေ ၂၀၀ ကရေကိုစုပ်ယူကြောင်း၊ သဘာဝ ရေစုပ်စက်တွေလို ဖြစ်ကြောင်း ပြောတာကိုကြားဘူးဖတ်ဘူးတာမို့…..
ထန်းပင်စိုက်တာဟာ သစ်ပင် စိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးထဲမဟုတ်..ရေကိုစုစည်းထိန်းသိမ်းရာရောက်ပါတဲ့အကြောင်း ကိုဝင်းစိုးကိုကျွန်မက ပြန်ပြောပြချင်နေမိပါတယ်..။သူတစ်ပါးအားအပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းတွေ နဲ့ အချိန်မကုန်စေပဲ ။ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ ကို ကြင်နာစွာ တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေခြင်း က..ကမ္ဘာမြေကိုအမှန်တကယ် ချစ်သူများရယ်လို့ကျွန်မက မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်မိပါတော့တယ်..။
ခေတ္တ… မုံရွာKing and Queen Hotel
ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးပေးပို့ တဲ့ ကိုဝင်းစိုးရဲ့ တူမလေး မမျိုးသ်ီရိဝင်း ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ရှင်..။
Upload by ThanThan Sein
ထနျး ပငျ ၂၀၀၀ စိုကျပြိုးခဲ့သူ ကိုဝငျးစိုး
ထနျး ပငျ ထနျးတော လှမျးမောစရာ ပါပဲလို့ဆိုရလောကျအောငျ တကယျပဲ လှမျးစရာတှဖွေဈခဲ့ပါတယျ..။ ထနျးပငျဆိုတာ အသုံးဝငျတာ အသာထား…..အပငျပုံပနျးသဏ်ဍနျ အရ..ဖွောငျ့စငျးသော ပငျစညျ နဲ့ သပျယပျတငျ့တယျ တဲ့အခကျအလကျတှေ နဲ့ လောကအလှ ဝနျးကငျြ မှာ ထောငျမတျသောပနျးအိုးလေး စိုကျထားသလို မို့ ကမြ အလှနျ ခဈြခငျ တဲ့ ဖေးဘရိတျ သဈပငျဖွဈခဲ့ရပါတယျ…။
ငယျငယျ က ရှတေိဂုံစတေီ ဖူးရနျသှားတဲ့အခါ မိဘတှကေမွောကျဘကျမုချစောငျးတနျးက ပဲ တကျလရှေိ့တာမို့…။မွောကျဘကျမုချ မှာ ထနျးပငျကွီးသညျ ရှတေိဂုံစတေီတျောမွတျ ကိုဦးခိုကျနသေယောငျ ပုံရိပျဟာ ငယျဘဝ ထဲကစှဲမွဲနခေဲ့ဘူးပါတယျ..။
နောကျ ဆရာမဖွဈတော့ ပုသိမျကွီး စိုကျပြိုးရေးသိပ်ပံ မှာ…။ ကနောငျမငျးသားကွီး ကိုယျတိုငျ စိုကျပြိုးခဲ့တဲ့ အိမျရှမေ့ငျးထနျးတော အနီးမှာ..။ထနျးပငျ ၂၀၀၀၀ လောကျတော့ရှိပါသတဲ့..။ ၄၆နှဈမှာ ကံတျောကုနျသှားတဲ့မငျးသားကွီး မှာ ထနျးရသေောကျတာ ဖယျထားရငျ ထနျးပငျစိုကျတဲ့ကုသိုလျတော့ပါသှားမှာ အမှနျ ပါ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈ ကြှနျမ အညာ ကိုရောကျတဲ့အခါ အညာဒသေက ထနျးသီးမြားကား အရေးလုပျသူမရှိ။ ။ အပငျပျေါမှာ အခိုငျလိုကျခွောကျကပျနတော မွငျရတော့ စိတျမသကျမသာ မွငျကှငျးအဖွဈမကျြနှာ လှဲခဲ့ဘူးပါတယျ..။
ထနျးတကျသူမြား မရှိတော့…ပွညျပ ထှကျခှာသှားသူမြား…… မြားလာလို့ အားလြော့ခဲ့ပါသောလယျ ယာကဏ်ဍ….ထနျးလကျြခကျြဘို့ ထငျးရှားပါးမှုကလညျး ထနျးမြားရှငျသနျရပျတညျမှုကို ထောကျကနျမပေးနိုငျ..။အျော…လှမျး လညျးလှမျး၊ မောလညျးမော သောခဈြသောထနျးတောမြား ၊ထို ခဈြသော ထနျးတောမြား သညျ အညာ မှာမပြျောပိုကျတော့ပွီလော….။ ကြှနျမဝမျးနညျး မိပါတယျ…။
ခငျဦးမွို့ က ကိုဝငျးစိုး ဆိုသော သူကိုတှတေ့ော့ အနညျးငယျ အားတကျမိပါတယျ..။ ထနျးပငျ နှဈထောငျ တဈယောကျတညျးစိုကျပြိုးပါသတဲ့။သူကတော့ အိမျရှမေ့ငျးသားလို ထနျးရညျသောကျခငျြလို့စိုကျတာတော့မဟုတျပါ။ အညာအလှကိုနိုငျသလောကျ ထိနျသိမျးလိုသူ ဖွဈပါတယျ…။
ကြှနျမ က ကိုဝငျးစိုး ဒီလို ဇှဲ နပဲ နဲ့ စိုကျဘို့ ဘယျသူကတှနျးအားပေးခဲ့ပါသလဲ ..ဆိုတော့..။ ဆရာမရယျ သဈပငျစိုကျတယျ ဆိုတာ ကုသိုလျ ရတာပဲလေ…. တဲ့..တီဗီက တရား နာဘူးတယျ ..။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောစိုကျခဲ့တာတဲ့..။ သူ့နာမညျက ကိုဝငျးစိုး အခုဆိုအသကျ၅၅ နှဈရှိပါတယျ…။ ၂၀၀၉ ခုနှဈကတညျးကစိုကျခဲ့တာဆိုတော့ သူ့အသကျ၄၅ နှဈက စတငျစိုကျခဲ့ပါတယျ..။ ခငျဦး မွို့ မွငျးဒေါငျးရှာကနေ သာဝတ်ထိ ရှာ ကို သှားတဲ့ လမျး ကာဘိုးဆညျ ကရပေေးမွောငျး တဈလြှောကျ ကိုရှေးခဲ့ပါတယျ..။
ထနျးသီး တှေ အလိုလို ကွှကွေနတေဲ့ သာဝတ်ထိရှာ ရဲ့ တောငျဘကျက ဥယြာဉျရှာကနေ ထနျးသီးတှကေိုလှညျးနဲ့ တိုကျပါတယျ…။ပွီး တော့ ရပေေးမွောငျးနဘေး လမျးတဈဘကျတဈခကျြကို စတငျစိုကျပြိုးပါတော့တယျ…။ထနျးသီး စိုကျဘို့ မွကေငျြးတူးဘို့ ပေါကျတူးကိုလညျးသယျ …။ စိုကျကငျြးကိုလညျးတူး…။တူးလိုကျ စိုကျလိုကျ နဲ့ မနကျနထှေကျကတညျးက စိုကျတာ… တဈရကျ ကိုအပငျ ၂၀၀ ပွီးဘို့မနညျးအားခဲလုပျဆောငျရပါတယျ..တဲ့..။
ကိုဝငျးစိုးက လယျ ၁၅ ဧက ရှိသလို နှားကလညျး ၁၈ကောငျရှိလတေော့ ပငျမ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးနဲ့ အားလပျရှာသူတဈယောကျတော့မဟုတျခဲ့ပါ..။သူ့ရဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုကွောငျ့သာ လုပျဆောငျနိုငျခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ..။သူ့နတေဲ့ ရှာနဲ့ နီးတဲ့လမျး လညျးဖွဈတယျ ဆိုတော့ အမွဲတမျးကွညျ့ရှု စောငျ့ရှောကျခဲ့ပါတယျ..။
မညညျးမညူ တဈဦးတညျး စိုကျခဲ့တာ လမျးရဲ့ ယာဘကျကို ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ အပငျ၁၀၀၀ ရှိခဲ့ပါတယျ..။ဇှဲနဘဲနဲ့စိုကျ လညျးစိုကျ….. သသှေားတာရှိခဲ့လြှငျလညျး ခကျြခငျြးပွနျလညျ ဖာထေးခဲ့ပါတယျ..။၂၀၁၂ ကတြော့လမျးရဲ့ ယာဘကျကို စတငျစိုကျပြိုးတာ ၂၀၀၉ ခုနှဈကစိုကျသလိုမြိုး အပငျ ၁၀၀၀ ထပျစိုကျခဲ့ပါတယျ..။
၂၀၁၆ မှာတော့ အပငျမပေါကျတာတှပွေနျလညျ ဖာထေးတာ အခုဆို ခငျဦး မွို့ မွငျးဒေါငျးရှာကနေ သာဝတ်ထိ သှားရာ မွသေားလမျး လေးတဈဘကျတဈခကျြ မှာ ဝဆောလှပနပေါတော့တယျ..။
ကာဘိုးဆညျ ကရပေေးမွောငျး တဈလြှောကျမှာ အခုဆို ၁၀နှဈသား ထနျး နဲ့ ၇နှဈသားထနျးပငျမြားကို တှရေ့ပါတော့တယျ ။ထနျးပငျတှကွေီး လာပွီ ဆိုတော့ ထနျးပငျတှကေ ရှာထဲမှာ လညျးမရှိ…။ အမြားပိုငျနရော ထဲမှာဆိုတော့..တဈယောကျယောကျ တဈခုခု ခူးဆှတျမယျ စားမယျ ဆိုရငျကော…. လို့ကြှနျမကမေးမိပါတယျ..။
ဆရာမရယျ စစိုကျကတညျးက အမြားအတှကျလှူပွီးသားပါတဲ့..။ အပငျပြောကျသှားတဲ့နရောပွနျစိုကျဘို့ ကြှနျတျောကတော့အရိပျတဈကွညျ့ကွညျ့ပါပဲ တဲ့..။ရှာမှာ လညျးဆေးခနျးရှိတယျလေ… ဆေးခနျးရှေ့ မှာ ကြှနျတျောဗနျဒါပငျ ၂ပငျစိုကျတယျ … တဈပငျပဲရှငျတယျ…။ ထပျစိုကျပါမယျ တဲ့..။ ဆေးခနျးက ဝနျထမျးဆရာမလေး တှစေားဘို့ ငှကျပြောပငျလညျး ၅ပငျ စိုကျပေး ထားပါတယျ လို့ ကိုဝငျးစိုးရဲ့ ဇနီး မသနျးသနျးဆငျ့ကဖွပေေးပါတယျ..။
သဈပငျမြားကိုခဈြသော..သဈပငျစိုကျသူမြားကိုပိုလို့ခဈြသောကြှနျမ ရဲ့ မကျြစတှေ့ကေ တော့ မွနျမာနိုငျငံအနှံအပွားမှာ ကိုဝငျးစိုးမြားစှာ ရှိနပေါစဆေုတောငျးလကျြ ရှာဖှေ နမေိတာ အမှနျပါ..။
မန်တလေးတက်ကသိုလျ ရုက်ခဗဒေ ဌာနမှ တှဲဖကျပါမောက်ခ ဒျေါကလြာလု၏အဆိုအရ ၂ဝ၁၂ ခုနှဈမှ ယခုနှဈအတှငျး ထနျးပငျ ၅ဝ ရာနှုနျးခနျ့ လြော့ကသြှားခဲ့ပွီး အပငျပေါငျး ငါးသနျးခနျ့ ဆုံးရှုံးသှားခဲ့သညျဟု ဆို ပါတယျ.။
ထနျးပငျတှကေအညာဒသေအတှကျသဘာဝကပေးထားတဲ.ရစေုပျစကျကွီးတှပေါမွအေောကျပေ၂၀၀ကရတှေကေိုသူရှငျသနျဘို.စုပျယူရငျး ယာတှထေဲအပျေါမွဆေီလှာတှကေိုရရေောကျစပေါတယျ။တကယျတော့ အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေ သဲကန်တာရတှမှော ထနျးပငျနဲ.အမြိုးတူအပငျတှေ(စှံပလှံ လိုအပငျအုပျစုတှေ ) ရှိနတေဲ.နရောတှမှောသာရရှေိတာပါ။ အိုအစေဈလို.ချေါပွီး သိပျကိုတနျဘိုးထားကွပါတယျ..။
Dr.ဒျေါကလြာလူက ထနျးပငျတှကေအမွဈပေါငျးသောငျးခြီရှိနတောကွောငျ. မွအေောကျပေ၁၀၀၊ ပေ ၂၀၀ ကရကေိုစုပျယူကွောငျး၊ သဘာဝ ရစေုပျစကျတှလေို ဖွဈကွောငျး ပွောတာကိုကွားဘူးဖတျဘူးတာမို့…..
ထနျးပငျစိုကျတာဟာ သဈပငျ စိုကျတဲ့ကုသိုလျတဈမြိုးထဲမဟုတျ..ရကေိုစုစညျးထိနျးသိမျးရာရောကျပါတဲ့အကွောငျး ကိုဝငျးစိုးကိုကြှနျမက ပွနျပွောပွခငျြနမေိပါတယျ..။သူတဈပါးအားအပွဈတငျရှုံ့ခခြွငျးတှေ နဲ့ အခြိနျမကုနျစပေဲ ။ကိုယျလုပျစရာရှိတာ ကို ကွငျနာစှာ တဈစိုကျမတျမတျ လုပျဆောငျနခွေငျး က..ကမ်ဘာမွကေိုအမှနျတကယျ ခဈြသူမြားရယျလို့ကြှနျမက မှတျတမျးတငျထားလိုကျမိပါတော့တယျ..။
ခတ်ေတ… မုံရှာKing and Queen Hotel
ဓာတျပုံမြားရိုကျကူးပေးပို့ တဲ့ ကိုဝငျးစိုးရဲ့ တူမလေး မမြိုးသျီရိဝငျး ကိုကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ ရှငျ..။
ယခု ၂၀၁၉ မှာ.. ဆယ်တန်း ဖြေသူတိုင်း.. အောင်အောင် ကျကျ …ဆယ်တန်း...
ကလေး ၁၃ ယောက်လုံး ပြန်တွေ့ပြီဆိုတဲ့ အချိန်တုန်းက အရမ်းကို ပျော်နေခဲ့တာ အခုတော့...
“၅ လပိုင်း ထဲမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ …ကရင်ပြည်နယ်မှ...